जाडोमा छालालाई स्वस्थ राख्ने ४ घलेलु उपायहरु – Tungoon
होमपेज » समाचार » सुरक्षा » स्वास्थ्य
जाडोमा छालालाई स्वस्थ राख्ने ४ घलेलु उपायहरु
काठमाडौं । कात्तिक २७ गते
हाल जाडो यामको सुरुवात भैसकेको छ । जाडोमा स्वाथ्यको एकदमै ख्याल गर्नु पर्छ । जाडोमा चिसोले छाला सुख्खा भई छालाको सौन्दर्य विग्रिने गर्छ ।
हावा र पानी चिसो हुने भएकाले छाला सुख्खा र फुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले जाडो मौसममा छालालाई विशेष प्रकारले हेरचाह गर्न आवश्यक छ । जाडो मौसममा छालालाई नरम बनाई राख्नका लागि दिनमा एक पटक क्लिजिङ मिल्कले अनुहार सफा गर्नुपर्छ ।यसो गर्नाले अनुहारमा फोहोर जम्न पाउँदैन र अनुहार सफा रहिरहन्छ । त्यस्तै छालालाई कोमल र नरम बनाउनका लागि राति सुत्नु अगाडि अनुहारमा मोइश्चराइजर, भिटमिन(ई लगाउनुपर्छ । छालाई स्वस्थ राख्ने विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
जाडोमा छालालाई स्वस्थ राख्ने घलेलु उपायहरु यसप्रकार छन् ।
१ जाडो मौसममा छाला नरम बनाउन दही र चिनी मिक्स गरेर यसलाई अनुहारमा राम्रोसँग लगाउनुपर्छ र केही बेर सुक्न दिएर हल्का हातले मालिस गरे पछि मनतातो पानीले धुनुपर्छ ।जाडोमा सकेसम्म थोरै साबुन प्रयोग गर्नु हुदैन यसलाइृ छालाई सुख्खा बनाउने गर्छ । यदि छाला सुख्खा छ भने, यसलाई स्क्रब गर्नु हुदैन । किनकि यसले छालाको प्वाल खोल्दछ तर सुख्खापन र डन्डिफोर वृद्धि गर्न सक्छ। यदि छाला तेलमा छ भने मात्र स्क्रब गर्नुहोस् ताकि यसले छालाको तेल घटाउन सक्छ।
२ . जाडोमा छाला एकदम सुख्खा हुन्छ। यसको लागि भिटामिन(ई समावेश गरिएको मॉइश्चराइजर लागू गर्न आवश्यक छ। सफा पानीले अनुहार धोएर राम्रो मॉइश्चराइजर दैनिक र रातमा ३(४ पटक प्रयोग गर्नु पर्छ । त्यस्तै मानिसहरूले जाडो हुने बित्तिकै तातो पानीले नुहाउन सुरु गर्छन्, तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि धेरै तातो पानीले तपाईँको छालालाई सुक्खा बनाउन सक्छ।
३ . ग्लिसरीन, कागती र गुलाबजल पानी मिलाएर मिश्रण बनाउनुहोस् र यसलाई सिसीमा भरेर यो मिश्रण रातमा सुत्नु अघि अनुहार र शरीरमा लगाउनुहोस् र बिहान उठ्नुहोस् र मनतातो पानीले नुहाउनु पर्छ । त्यस्तै मौसम जस्तोसुकै भए पनि छाला हेरचाह आवश्यक छ, त्यसैले स्वस्थ र सन्तुलित खाना खान महत्त्वपूर्ण छ। मौसमी फल र तरकारीहरू खानुहोस्। यदि यो जाडो छ भने गाजर, पालक, मेथी, रायो र कागती जस्ता चीजहरू समावेश गर्नुपर्छ । त्यसैगरि जाडोमा मानिसहरूलाई अक्सर सनबल्कको प्रयोग गर्दछन् तर जाडोमा जरुरत सम्झँदैनन्, जबकि हिउँदमा सूर्यको किरणले सबै भन्दा बढी क्षति गर्न सक्छ ।यस कारण जाडोमा पनि बाहिर निस्कँदा सनबल्कको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
४. चिसो वा गर्मी को जुन समयमा पनि पानी प्रशस्त पिउनु पर्छ । ताकी शरीरमा पानीको कमी नहोस् । जसले गर्दा छाला मर्न बाट जोगाउँछ र छालामा चमक रहिरहन्छ ।छाला नरम र स्वस्थ राख्न नारिवलको तेल प्रयोग गर्नुहोस्। नरिवलको तेल केवल कपालको लागि मात्र उपयोगी हुँदैन, तर दैनिक स्नान गर्नु अघि एक घण्टा शरीर र अनुहारको मालिश गर्नुहोस् र त्यसपछि नुहाउनुहोस्। छाला कहिल्यै सुख्खा हुँदैन।